The Irrawaddy's Blog: Help !
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့တခုရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၉၀ အကွာ ပင်လယ်ပြင်မှာ သင်္ဘောပျက်ပြီး မျှောပါနေတဲ့ မြန်မာ သင်္ဘောသား ၁၂ ယောက်ပါတဲ့ ဖောင်ကို ယနေ့ တွေ့မြင်ရပုံပါ။ မြန်မာသင်္ဘောသားတွေကို ထိုင်ဝမ်ရေတပ်က တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ပနားမားက Dili Star ကုန်တင် သင်္ဘော တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်းမိ နစ်မြုပ်ပြီးနောက် မြန်မာ သင်္ဘောသားတွေ အခုလို မျှောပါလာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံ - AP)
ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါပဲလား။ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ဒါတွေဆက်ဖြစ်နေမှာပဲ။
ဘယ်အစိုးရတက်တက် မုန်းတိုင်မိလို့ဖြစ်တာပဲ. မဆိုင်တာ..
အော် ဆိုးလိုက်တဲ့ ကံကြမ္မာ ရိုက်ခတ်လေသလားလို့ပြောရမလားမသိတော့ဘူး ..ပြည်သူကို အုပ်ချုပ်တဲ့သူမကောင်းတဲ့ဒဏ်ကြောင့် အပစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေ ကစဉ်းကလျားနဲ့ ဒုက္ခတွေရောက်ကြရတယ်..ဒီလူတွေ ဘေးမသီ ရန်မခပဲ ပြန်ရောက်ပါစေ...သတ္တ၀ါခပ်သိမ်း ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်မှာ ကင်းရှင်းကြပါစေ..
လူမှန် said... :
ဒါကတော့ဗျာ....ကမ္ဘာ့ အရပ်ရပ်မှာ သဘာဝ ဘေး အန္တရာယ် အမျိုးမျိုး ကျရောက်နေတာပါ၊ နေရာတကာ ဖြစ်သမျှတော့ အစိုးရနဲ့မဆိုင်ဘူးလေ၊ အဲ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင် ရေးတော့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်။
တော်သေးတာပေါ့ နိုင်ငံခြားသဘောင်္လိုက်လို့မိလို သက်ကယ်ဖောင်နဲ့ မြန်မာ ကြယ်ငါးပွင်သာဆို...
But they(Myanmar Goverment) need to takecare them.